Diamond Diaries Saga 1.18.0.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.18.0.4 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Diamond Diaries Saga
Diamond Diaries Saga ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အသစ်ကစိန်မှတ်တမ်းများ Saga Download ဘုရင်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကပဟေဠိ linker ဂိမ်း, Candy Crush Saga ၏ဖန်တီးသူ။
တူညီတဲ့အရောင်3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို Charm ချိတ်ဆက်နေဖြင့်လက်ဝတ်ရတနာ၏အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို Create နှင့်သင်ရွေ့လျားထဲက run ရှေ့တော်၌ထိုရည်မှန်းချက်ကိုဖြည့်!
အဆင့်ဆင့်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂိမ်းအသစ် Modes သာစိန်ခေါ်, ပျော်စရာတန်ချိန်နှင့်အတူထူးခြားဆန်းပြားမြို့ကြီးများမှခရီးသွားခြင်း။
ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာပဟေဠိစွန့်စားမှုအတွက်လှပသော Charm ချိတ်ဆက်ရန်ကလင်နည်းလမ်းသစ်ပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူ devices များနှင့်လက်လှမ်းမီအပြည့်အဝဂိမ်း features တွေအကြားကစားပွဲစည်းညှိ
တစ်ဦးတည်းကဒီ Epic Saga အပေါ်ကိုယူသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရနိုင်သူကိုကြည့်ဖို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆော့ကစား!
စိန်မှတ်တမ်းများ Saga ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်သို့သော်အချို့ optional ကို In-ဂိမ်းပစ္စည်းများငွေပေးချေမှုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအကူအညီနဲ့သို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုလိုအပ်ပါက, သင်တို့သည်ငါတို့၏ In-ဂိမ်းအကူအညီစင်တာအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်အမေးအဖြေများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ရုံအပြင်အဆင်များခလုတ်ကိုထိပုတ် click နှိပ်ပြီး "i" ကတွေ့ရှိရန်ရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျလညျး, ထင်မြင်ယူဆချက်များကို share ပြိုင်ပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနှင့်စိန်မှတ်တမ်းများ Saga အဝန်းအခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ် https://community.king.com/en/diamond-diaries-saga
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းလမ်းညွှန်များနှင့်မည်သည့် 24 ကာရက်မတရားသောကျေနပ်ဖို့အကြံပေးချက်များ & လှည့်ကွက်တစ်ခုစည်းစိမ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန် https://www.diamonddiariesgame.com သွားရောက်ကြည့်ရှု!
သင့်မိုဘိုင်းပေါ်မှာဤ app ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲအားဖြင့်သင်တို့ကိုဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေါဟာရများမှသဘောတူကြသည်; http://king.com/termsAndConditions
Diamond Diaries Saga အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Diamond Diaries Saga အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Diamond Diaries Saga အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Diamond Diaries Saga အား အခ်က္ျပပါ
oyebahi စတိုး 19 39.29k
Diamond Diaries Saga ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Diamond Diaries Saga အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.18.0.4
App Name: Diamond Diaries Saga
Release date: 2019-08-05 23:02:13
လက်မှတ် SHA1: E4:38:36:6B:19:EC:16:B2:EF:44:FB:AF:B8:E7:2C:67:85:97:7A:C4
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Evgenios Rodopoulos
Diamond Diaries Saga APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ